Madaxwayanaha Sudan Oo La Sheegay Inuu Xidhiidh Rasmi Ah La Soo Sameeyey Madaxwayanaha Somaliland Iyo Go’aan Cusub Oo Laga Soo Saaray Hubkii Iyo Markabkii Siday | Saxil News Network
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo,ayaa la sheegay inuu go’aamiyay in la sii daayo Markabka MV-Shaakir iyo Hubka saarnaaba kadib markii dhambaal lagu sharaxayo Arrinta Hubkaasi ugu yimid Madaxtooyada Suudaan oo sheegatay lahaanshaha Hubkaasi.
Ma jiro war Rasmi ah oo Xukumadda Somaliland ka soo baxay, balse Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in Madaxweynaha Sudaan Cumar Al-bashiir Qoraal u soo diray Madaxweyne Siilaanyo,sidoo kalena xidhiidh telefoon dhexmaray, waxayna dawladda Sudan sheegtay inay leedahay Hubka Markabku sido, islamarkaana uu yahay Hub loo waday Carwo hubka lagu soo bandhigayo oo Dubai ka dhacaysa 22-26-ka bishan. Waxay Suudaan meesha ka saartay in Hubkani ganacsi ku lug leeyahay iyo in cid gaar ah loo waday.
Wararka ayaa sheegay in Madaxweyne Siilaanyo xidhiidhka Sudan ka dib go’aansaday in Maanta la fasaxo Markabkaasi iyo Hubka saarnaaba kadib markii uu Berbera ku xidhnaa tan iyo 24-kii bishii hore.
Arrintan ayaa imanaysa iyadoo Shalay la dejiyay Hubkii Saarnaa Markabka sidoo kalena Wasiir warancadde sheegay in Hubka Sudan sheegatay balse aanay wax caddayn ah ka haynin.
Idaacadda BBC-da ayaa sidoo kale sheegtay in Markabkaasi Maxakamadda Saaxil ku riday Ganaax Lacageed, haseyeeshee lama oga waxa laga yeelayo Maxakamadaynta Markabka iyo Shaqaalihiisa maadaama oo uu hubsiday isagoo markab ganacsi ah.